NOOBS: isa akawanda masisitimu pane yako Raspberry pi nechokushandisa | Kubva kuLinux
NOOBS: isa akawanda masisitimu pane yako Raspberry pi nechombo ichi
Pakutanga ndanga ndisingafungire zvishoma nezve Raspberry Pi, asi ndakashinga, tanga neRaspAnd uye kunyangwe mhedzisiro yacho yaive yezvakavimbiswa, Ndakasara ndichinzwa kakusina kugutsikana. Uchiona kuti chishandiso ichi chinogona kukwidziridzwa zvakanyanya, ita sarudzo yawanga usingade pakutanga uye zvirinani sarudza kuisa Linux system pairi.
Raspberry Pi ine yepamutemo inoshanda sisitimu kuti vazhinji vachatoziva kana kunzwa nezvazvo Raspbian iyo yakavakirwa paDebian. Naizvo Kune mamwe marongero, aya anobva kumatatu senge Ubuntu Mate, Windows 10, Libreelec, RecalBox, pakati pevamwe.
Tichifunga nezve urwu runyorwa rwevaya vedu vachangowana Raspberry, isu hatizive mamwe eaya aripo masisitimu uye mamwe anogona kuraswa nekutadza.
Kuti udzivise kuyedza yega yega system, unofanirwa kuumbiridza iyo SD, kukanda iyo system pairi uye kuiisa zvakare muRaspberry Pi, isu tine chishandiso chakakura chinotibvumidza isu kuisa aya ese masisitimu panguva imwe chete.
1 Nezve NOOBS
2 Mashandisiro ekushandisa NOOBS paRaspberry Pi?
Nyowani Kunze Kwebhokisi Software zvinonyatso kuzivikanwa seNOBOBS chinhu chikuru chatinogona kushandisa pane yedu Raspberry Pi, chishandiso ichi inotipa mukana wekuisa kanopfuura kamwe chete sisitimu yekushanda pasina zvinetswa uye nenzira yakapusa.
Kuti ushandise chishandiso ichi isu tinofanirwa kuenda kune yepamutemo webhusaiti yeRaspberry uye muchikamu chayo chekurodha tinokwanisa kuwana NOOBS, iyo chinongedzo ndeichi.
Sezvauri kuona NOOBS ine shanduro mbiri "NOOBS uye NOOBS Lite"Musiyano uripo pakati peumwe neumwe ndewekuti iyo Lite vhezheni haina kuwedzera Raspbian kana LibreELEC mairi kuti vakwanise kuiisa munharaunda, nepo yakajairwa vhezheni iine iyo nekutadza.
Pano iwe Unogona kudhawunirodha vhezheni yaunodaNekudaro, kana iwe usiri kufarira kuisa Raspbian kana LibreELEC panguva ino, unogona kusarudza zvakananga kurodha Lite vhezheni.
Kana kurodha pasi kwaitwa, isu tinoenderera mberi tichidzvinyirira iyo yakawanikwa faira kubva kurodha pasi, neizvi isu tichawana dhairekodhi nezvose zvinodiwa mukati mayo kuti tikwanise kuisa akawanda masisitimu pane yedu Raspberry.
Mashandisiro ekushandisa NOOBS paRaspberry Pi?
Mukati sarudzo dzatinadzo neNOOBS kugona kuwedzera masisitimu ku "os" folda izvo zviri mukati izvo zvatakaburitsa zip izvozvi.
Mune iro folda isu tinongofanirwa kuwedzera masisitimu atiri kuda kuiswa.
Ini pachangu, handina kuwana chero mamwe masisitimu "azvino" anogona kuwanikwa naNOBOBS, nekuti iwo andakawana anouya mune dhisiki yemufananidzo fomati.
Ndatopedza zvese, Isu tinopfuurira kukopa zvese zvirimo muhombe NOOBS dhairekitori uye ndokuisa mukati medu SD yatomisikidzwa uye yakagadzirira kushandisa.
Ya yakaisa iyo SD kune yedu Raspberry Pi uye yakabatana nezvose zvinodikanwa, isu tinoenderera nekuibatanidza kune simba rekuibatidza, isu tobva tangoona diki skrini uye tomirira mashoma masekondi kuti NOOBS itange.
Waita izvi zvinoenderana neshanduro yeNOOBS yawakadhinda ndiyo yaunotanga kuona, kana vakatora pasi iyo yakajairwa vhezheni ichaona Raspbian uye LibreELEC yakagadzirira kuiswapanguva Dai yaive lite vhezheni, ivo hapana chavachaona panguva ino.
Mukati meiyo NOOBS interface tinogona kuona kuti ine akati wandei sarudzo uye kuti zvine hungwaru, Chinhu chekutanga kubatana kune wifi network.
Ya yakabatana NOOBS ichagadzirisa runyorwa rweanowanikwa masisitimu, ichitiratidza zvimwe, sezvo ichizotora nekuzviisa.
Pano ngatisarudzei isu atinoda uyezve izvo izvo isu zvatinobvumidzwa kumisikidza sezvo zvinoenderana zvakanyanya nehukuru hweSD yedu.
Kamwe masisitimu paasarudzwa, isu tinongobaya pane yekuisa icon uye iwe unofanirwa kumirira kwechinguva apo maitiro acho achiitwa.
Pakupedzisira, NOOBS ichatitaurira kuti maitiro acho aitwa uye isu tinoramba tichitangazve Raspberry Pi yedu kuti tione masisitimu aanowanikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » NOOBS: isa akawanda masisitimu pane yako Raspberry pi nechombo ichi
MX-Linux 17.1: Yemazuva ano, yakajeka, ine simba uye ine hushamwari Distro.